February 2021 - SonSon LinLin
February 28, 2021 sonsonlinlin 0
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော်။ ၀၁. ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစားအားကိုးခံရမည့်သူပါ။ မမှားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမှာပါ။ ဒါပင်မဲ့ နည်းနည်းခေါင်းမာသူဖြစ်ပြီး အများအတွက်ထက် ကိုယ့်အတွက်ကို ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ထက် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုလည်း စဉ်းစားတတ်ပါစေ။ ၀၂. ရိုးသားပြီး ယုံကြည်ရသောသူ၊ လူစိမ်းကို ယုံလွယ်သောသူ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိပြီး လူတွေအပေါ် ရိုးရိုးသားသား ဆက်ဆံနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ လူတွေကို […]
ခ်စ္သက္တမ္း႐ွည္ဖို႔ လက္မခံလို႔မျဖစ္တဲ့အခ်က္ ၂၀
အချစ်နဲ့ အရာရာအကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမယ် တဲ့။ တကယ်တမ်းတော့ အချစ်တစ်ခုတည်းက ပျော်ရွှင်နားလည်မှုရှိတဲ့ ချစ်သက်တမ်းတစ်ခုကို ထူထောင်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ချစ်သူဘဝဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ရှင်ဘဝဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ နှစ်ယောက်ပေါင်းဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ လက်မခံလို့မဖြစ်တဲ့ အချက်ပေါင်း ၂၀ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ၁. ကိုယ်ပြောင်းလဲလို့မရတာတွေကို လက်ခံပါ။ ၂. ကိုယ့်ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ကို ပြုပြင်လို့မရဘူးဆိုတာ လက်ခံပါ။ ၃. ကိုယ့်ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ စင်းလုံးချောပြည့်စုံမနေကြောင်း လက်ခံပါ။ ၄. လူတိုင်း ကိုယ့်လို […]
သူနဲ႔ကုိယ္ အတိတ္ဘဝက ေရစက္ပါလာသလားဆုိတာ သိခ်င္ပါသလား
ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဆိုတာ တစ်ဘဝတည်းရဲ့ ရေစက်ကြောင့် ဆုံလာရတာ မဟုတ်ဘဲ အတိတ်အတိတ်တွေက ဆုံဖူး တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ ရေစက်တွေကြောင့် အခုဘဝမှာ လက်တွဲဖော် ဖြစ်လာရတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မြင်မြင်ချင်းချစ်တဲ့အချစ်ဆိုတာ ရှေးရေစက်ကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ အချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ အတိတ်ဘဝက ရေစက်ပါသလားဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက် ၃ ချက်ရှိပါတယ်။ သူနဲ့ ကိုယ်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့စမှာပဲ ရင်းနှီးနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရလိုက်တာ ဘာစကားမှ ပြောစရာမလိုဘဲ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းလို ဆွေမျိုးရင်းချာတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသလို ဖြစ်သွားတာ။ […]
ကျွန်မလက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ အဖြူရောင်ဆေးစာရွက်ကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေက တားဆီးလို့မရနိုင်အောင် ကျလာပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကမ္ဘာကြီးပြိုလဲကျတော့မလို ခံစားနေရပါတယ်။ ရုတ်တရက် အမှောင်ကျသွားသလို ခံစားရပြီး မျက်လုံးထဲမှာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ မြင်ယောင်နေမိပါတယ်။ ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာ ရှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ သမီးလေးကို အိမ်ထောင်သက် နှစ်နှစ်မှာ မွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က စပြီး ကျွန်မတို့ ဘဝတွေပြောင်းလဲ လာခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုတစ်စု အတွက် မြို့ပြလူနေမှု အဆင့်အတန်းနဲ့ အညီနေထိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ […]
သတိထား ဆက္ဆံရမယ့္သင့္အနားမွာရွိတဲ့လူ (၈) မ်ိဳး (သိထားသင့္လို႔ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္)
သတိထား ဆက်ဆံရမယ့် သင့်အနားမှာရှိတဲ့ လူ (၈) မျိုး (သိထားသင့်လို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်) ၁။ တင်စီးသူများ သူတို့အတွက်တင်စီးတာဟာယုံကြည်မှုရှိတာပါ။မာနဟာဘဝနေထိုင်နည်းပါ။ဘေးနားကလူတွေထက်အမြဲသာကြောင်းပြဖို့ကြိုးစားနေသူတွေပါ။ ဒီလူတွေကိုလိုတာထက်ပိုပြီး မပတ်သက်ပါနဲ့။ ၂။ မနာလိုသူ မနာလိုတာပါ။သင်အောင်မြင်တာကို မကျေနပ်တာမျိုးတင်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်အခက်အခဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာကိုပျော်နေတာပါ။ဒီလူတွေရဲ့အကျင့်ကိုကအဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပါ။ ၃။ ဟန် သမား ဒီလူတွေကတော့အေးအေးဆေးဆေး သမားတွေပါ။ဖော်ရွေပါတယ်။ သူငယ် ချင်းအရင်းကြီးအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သင် ဒုက္ခရောက်ပြီ၊အကူအညီလိုပြီဆိုတာနဲ့ သင့်အနားကပျောက်သွားပါပြီ မရှိတော့ပါဘူး။ ၄။ နောက်ပြန်သမား သင့်တိုးတက်မှုကိုပုံဖျက်မယ့်လူတွေပါ။ မကောင်းတဲ့ယခင်ကအလေ့အကျင့်ဟောင်းတွေဆီသင့်ကိုပြန်ဆွဲချသွားမယ့် လူတွေပါ။ […]
ကိုယ့်ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်မိရင် သူကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာ ရိုးသားနေတယ်ဆိုတာသိတယ် ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကတော့ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့အဆက်သွယ်ခဏလေးမရတဲ့အခါ သူ့အခက်ခဲနဲ့သူဆိုတာနားလည်ပါတယ် ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်စိတ်ပူမိနေတတ်ကြပါတယ်။ ပြသနာအသေးမွှားလေးတစ်ခုပါပဲ ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲတွေးမိပါတယ် ဒါပေမဲ့အရမ်းကြီးကျယ်တဲ့ပြသနာကြီးတစ်ခုလိုတွေးနေတတ်ပါတယ်။ (ပြီးတော့လဲ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး) တစ်ခါတစ်လေသူအလုပ်ရူပ်နေတယ်ဆိုတာသိပါတယ် ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ခံချင်တဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းအလိုမကျသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ (သူ့ဆီကလေပြေလေးနဲ့ဝင်လာရင် ပျောက်သွားတတ်ပြန်ရော)… နားလည်မှုအလွဲလေးတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါတိုင်းဘာမှမဟုတ်တာကို ဟိုးတွေးဒီတွေးတွေတွေးပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်နာကျင်ခံနေတတ်ကြပါတယ်။ Zawgyi ကိုယ္႔ခ်စ္သူကိုအရမ္းခ်စ္မိရင္ သူကိုယ္႔ေနာက္ကြယ္မွာ ရိုးသားေနတယ္ဆိုတာသိတယ္ ဒါေပမဲ႔စိုးရိမ္စိတ္ေတြကေတာ႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔မရပါဘူး။ ကိုယ္နဲ႔အဆက္သြယ္ခဏေလးမရတဲ႔အခါ သူ႔အခက္ခဲနဲ႔သူဆိုတာနားလည္ပါတယ္ ဒါေပမဲ႔သူ႔အတြက္စိတ္ပူမိေနတတ္ႀကပါတယ္။ ၿပသနာအေသးမႊားေလးတစ္ခုပါပဲ ဘာမွမဟုတ္ဘူးဆိုတာလဲေတြးမိပါတယ္ ဒါေပမဲ႔အရမ္းႀကီးက်ယ္တဲ႔ၿပသနာႀကီးတစ္ခုလိုေတြးေနတတ္ပါတယ္။ (ၿပီးေတာ႔လဲ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး) တစ္ခါတစ္ေလသူအလုပ္ရူပ္ေနတယ္ဆိုတာသိပါတယ္ […]
သင်ဟာ သင့်ရှေ့ကမှန်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သွားတာမျိုး ခံစားဖူးပါသလား။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်မတို့ဟာ မျှော်လင့်ချက်၊ အိပ်မက်တွေ အချစ်တွေ၊ အကြောက်တရားတွေကို အရှုံးပေးပြီး နာကျင်ခံစားကြရတဲ့အချိန် တွေရှိပါတယ်။ တခြားလူတွေ ကိုယ့်ကိုတကယ်မပေးပါပဲ ရသလိုလို ခံစားနေကြတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကိုတနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာနေကြတယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူကများ သင့်ကို သင့်ကိုယ်သင်ချစ်တာထက် ပိုချစ်နိုင်မှာလဲ။ ဒါ့အပြင် သင်လည်းတခြားသူကို သင့်ကိုယ်သင်ချစ်တာထက် ပိုမချစ်နိုင်ပါဘူး။ ပိုချစ်တယ်လို့ ဆိုရင်လည်း ဒါမှားတာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် […]
ခ်စ္ရသူနဲ႔ အၿမဲမခြဲ လက္တြဲသြားခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို လိုက္နာျပဳမူရန္ လိုအပ္
ကိုယ့်ချစ်ရသူနဲ့ တစ်သက်လုံး လက်တွဲပြီး ဘဝခရီးလမ်းကို အတူလျှောက်လှမ်းချင်ပါသလား။ နှစ်ဦးသား လိုက်နာရမယ့် အချက်လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေက သင်တို့နှစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုနားလည်လာအောင်၊ သံယောဇဉ်ပိုရှိလာအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မယုံမရှိပါနဲ့။ ၁။ဖြေးဖြေးချင်း ရှေ့ဆက်ပါ။ စိတ်မြန်၊ လက်မြန် ဘယ်အရာကိုမှ မလုပ်မိပါစေနဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိအောင် ကြိုးစားဖို့ဆို ဘယ်အရာကိုမှ အလျှင်စလို လုပ်စရာမလိုပါ ဘူး။ တစ်ဆင့်ချင်းသွားပါ။ အတူနေဖို့၊ ချစ်တင်းနှီးနှောဖို့ ကိစ္စတွေကအစ ရည်းစားဖြစ်ပြီးပြီးချင်း လုပ်ဆောင် […]
သင့္ကို တကယ္ခ်စ္/မခ်စ္ ဘယ္လုိခြဲျခားသိႏုိင္မလဲ
လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဟာ မှန်းနိုင်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချစ်သူရည်းစားရဲ့ စိတ်နေ သဘောထားကိုပေါ့။ အချစ်စိတ်လွှမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ မိန်းကလေးတွေဟာ တော်ရုံကို အပြစ်မမြင်တတ်ကြပါဘူး။ ခိုင်မြဲတဲ့ချစ်ခြင်းတစ်ခုဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာမျိုးပါ။ စချစ်မိပြီ ဆိုကတည်းက အနည်းနဲ့အများတော့ ရှေ့ရေးအတွက် ကြိုတင်စဉ်းစားမိတတ်ကြသူ ချည်းပါပဲ။ အချစ်မှာ လိုအပ်တဲ့အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခုကျိန်းသေရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီအချိန်အပိုင်းအခြား အတွင်းမှာ သင့်အနေနဲ့ ဒီအချက်တွေ သူ့ဆီမှာရှိမရှိ ရှာဖွေကြည့်ပါ။ (၁) သင့်ရဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု ဒီတစ်ခုကတော့ အမျိုးသားတွေမလိုချင်ဆုံးအရာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ […]
သင့်ဆီက သဝန်တိုနေတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို နှစ်သက်လို့သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေးက တစ်ခါတရံ သင့်ရှေ့မှာ သင် သဝန်တိုနိုင်မဲ့ စကားလုံးလေးတွေကို သုံးနှုန်း နေမိတတ်တာပါ။ သင့်ဆီက အလေးအနက်ထားတတ်တဲ့ စိတ်ကို လိုအပ်နေမိလို့ သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေးက သူ့ထက်တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကို သင်ပိုပီး အလေးအနက်ထားပေးမှာကို ကြောက်နေမိတတ်တာပါ။ သင့်အပေါ် အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေကို ရှိနေလို့ သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေးက သင့်အနားကသူတွေအပေါ် သင်နဲ့ပါတ်သက်ပီး သဝန်တိုတတ်တဲ့စိတ်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေရတာပါ။ သင့်ကို တစ်ခြားသူတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်သွားရင်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေတွေးနေမိတတ်လို့သင့်ချစ်သူ […]